Gudoomiyaha degmada Xamarweyne oo si kulul uga hadlay xarigii lagula kacay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Guddoomiyaha degmada Xamar-weyne, C/qaadir Maxamed C/qaadiroo shalay la xiray, kadibna xalay la sii daayey oo maanta warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa dhaliilay qaabkii loo xiray isaga iyo ku xigeenkiisa oo ay shalay xabsiga dhigeen ciidammo ka tirsan booliiska Soomaaliya.
Gudoomiyaha ayaa xusay C/qaadir Maxamed ayaa tilmaamay in qaabka loosoo maray xariggiisa uusan ahayn mid sharci ah, uuna ahaa mid qaldan, wuxuuna uga mahad-celiyay maamulka gobolka Banaadir oo sii dayntiisa dadaal badan ku bixiyay.
“Raalli kama noqonayo in sharci-daro loosoo maro sidii xorriyadeyda la iiga qaadi lahaa, tallaabo noocan oo kalena ahna lagula kaco qof mas’uul ah,” ayuu yiri guddoomiyaha degmada Xamar-weyne.
Amarka lagu xiray guddoomiyaha degmada Xamar-weyne ayaa la sheegay in uu bixiyay xeer ilaaliye ku xigeenka Qaranka, Maxamed Xasan Nuur, iyadoo la sheegy in loo xiray raashin mucaawino ah oo la leexsaday.
“Waa nidaam-darro in anigoo guddoomiye degmo ah in la i xiro, iyadoo aan xarigeynta sharciga loosoo marin… waana fal xun falkii aniga la igu xiray,” ayuu ku daray hadalkiisa C/qaadir Maxamed C/qaadir.
Odayaasha Banaadiriga ah ayaa cambaareeyay xariga guddoomiyaha degmada Xamar-weyn, iyadoo aysan weli ka hadlin xarigga mas’uulkan dowladeed hay’adaha amniga dowladda.
C/qaadir Maxamed C/qaadir ayaa noqday gudoomiyihii degmo ee ugu horreeyey ee la xiro tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Xasan Sheekh, waxaase dhowr gudoomiye degmo la xiray xilligii madaxweyne Sheekh Shariif.